Microsoft Dynamics CRM ary MarketingPilot omeo anao ny fahitana ilainao hahafantarana tsara ny mpanjifanao. Miaraka amin'ny fitondran-tena mahery sy marketing Analytics, azonao atao ny mikendry sy manasaraka ny mpanjifanao mora foana, mahatakatra izay tiany, ary avy eo mampifanaraka azy ireo amin'ny fotoana mety amin'ny hafatra mety. Microsoft Dynamics CRM sy MarketingPilot dia manolotra automatisation marketing ho an'ny orinasa sy fitantanana fampielezan-kevitra multichannel.
Endri-javatra amin'ny MarketingPilot
Fitantanana marketing iraisana - Ataovy automatique sy araraotina ny asan'ny varotrao amin'ny alàlan'ny fitaovana fitantanana mavitrika sy maharitra mifantoka amin'ny fanampiana ny orinasa sy ny maso ivoho manomana, manatanteraka ary manara-maso ny varotra ataon'izy ireo.
Fitantanana loharanon-karena marketing - Tohizo ny fiaraha-miasa ataon'ny ekipanao ary alao antoka fa ao anaty tetikasa mety ny loharano mety.
teti-bola - Mahazoa fahitana amin'ny fotoana tena izy amin'ny fandaniam-bola amin'ny fampielezan-kevitra sy ny tetibola amin'ny marketing, ary maminavina marimarina kokoa.
Fitantanana fampielezan-kevitra - Ampifanaraho tsara kokoa amin'ny varotra sy hanatsarana ny fahombiazany amin'ny automatisation multi-fantsona tena izy.
Fividianana haino aman-jery & drafitra - Drafitra, ampitahao, ary atambaro ny fividianana haino aman-jery orinasa mora kokoa noho ny hatramin'izay.
Vahaolana masoivoho - Natao ho an'ny serivisy feno, fividianana haino aman-jery, famoronana, dokam-barotra, hetsika, fanandramana, PR ary masoivohon'ny valiny mivantana, ny vahaolana MarketingPilot dia manatsara ny asa ary manatsara ny famokarana sy ny tombom-barotra mihoatra ny rafi-pitantanana nentim-paharazana.